Budata Indriver Apk Maka gam akporo [ngwa Kacha ọhụrụ] - Luso Gamer
Ọ bụ ezie na ọtụtụ dị iche iche online njem ngwa bụ iru dị ka Careem na Uber wdg Otú ọ dị dị otú ahụ nyiwe nanị na-enye precalculated ichekwa. Nke a pụtara na ndị na-agba ịnyịnya enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ụgwọ. Ya mere, n'ịtụle ndị ọrụ nkasi obi anyị na-eweta Indriver Apk.
Nbudata ngwa faịlụ n'ime android smartphone ga-ekwe ka ndị ọrụ. Iji wepụta ezigbo ịnya ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ ọnụ ahịa n'ịntanetị. N'ihi nhọrọ azụmahịa, ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe mmasị ịnya igwe indriver.
A na-ahụta ikpo okwu dị ọnụ ala yana enyi na enyi karịa ka atụnyere nyiwe ndị ọzọ enwere ike iru. Mgbe anyị na-ekwu banyere usoro nke echichi na itinye n'ọrụ mgbe ahụ ọ dị mfe. Naanị budata ngwa Indriver kacha ọhụrụ wee mepụta ọtụtụ ịnya igwe n'otu oge.
Kedu ihe bụ Indriver Apk.
A na-ahazi Indriver Apk na maapụ & ngalaba nsoroụzọ. Otú ọ dị, ngwa ahụ na-elekwasị anya n'ezie ndị na-achọ ịgba ọsọ ọsọ na mfe. Iji mee ka usoro ịhọrọ na dobe ziri ezi, a na-agbakwunye GPS dị n'ịntanetị dị elu.
Ugbu a na-eji usoro nleba anya GPS ziri ezi, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-enwe ike iburu ma dobe ọtụtụ ịnya ụgbọ ala n'efu. Mgbe anyị tụlere ngwa na nyiwe ndị ọzọ enwere ike iru. Mgbe ahụ, anyị chọtara ngwa ịnya ụgbọ ala ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma na enyi na enyi.
N'ihi na onye isi na ndị na-agba ịnyịnya ejiriwo usoro ntinye akwụkwọ zuru oke. Ugbu a ọnụahịa agaghị ejikwa usoro AI nke atọ. Enyere ndị ọkwọ ụgbọ ala ikike ikpebi ihe ngosi. N'ihi na e were ya na ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala adịghị mma na awa price mgbe ahụ ọ / ọ nwere ike ngwa ngwa ịkagbu na-agba ịnyịnya.
Otu na-aga na onye na-agba ya na ọbụna ndị na-agba ịnyịnya nyere nhọrọ iji kwụọ ụgwọ maka ọnụ ahịa. N'ihi na ọ bụrụ na ahụ anaghị eru onye na-agba ya ego ụgbọ ụgbọ mmiri. Mgbe ahụ, ọ / ọ nwere ike mfe ide maka a bargain na chegharịa ọnụ ahịa. N'ihi ya, ị hụrụ n'anya atụmatụ wee wụnye Indriver Download.
aha Onye ọkwọ ụgbọ ala
Mmepụta Ụlọ ọrụ SUOL INNOVATIONS LTD
Aha ngwugwu sinet.startup.inDriver
Achọrọ gam akporo 6.0 na gbakwunyere
Ewezuga nhọrọ nkwekọrịta zuru ezu, ngwa ahụ na-akwado ịnye ọnụahịa ntụgharị, nhọrọ ọkwọ ụgbọ ala, usoro nchekwa nchekwa, hazie onye na-agba ọsọ, ego ego ego, mmemme emelitere n'etiti, ndị na-ebu ibu na nnyefe ngwa ngwa wdg.
Anyị atụleworị usoro nhazigharị ụgwọ ụgbọ ala na nhọrọ onye ọkwọ ụgbọ ala. N'elu ihuenyo mkpanaka, ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala dị nso ga-apụta na mkpado ọnụahịa atọ kacha mma. Ọ bụrụ na ahụ dị mmadụ mma na onye ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla enwere ike iru.
Wee họrọ aha mbanye na ọnụahịa wee mee njem n'ụzọ na-aga nke ọma. Cheta ndị mmepe hụ na ndị ọkwọ ụgbọala na nchekwa ndị ahịa. A na-agbakwunye ọbụna usoro mkpesa ndụ maka ime ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ọ naghị adị mmadụ mma maka azụmahịa na omume ọkwọ ụgbọ ala. Mgbe ahụ, ọ / ọ nwere ike hapụ ngwa ngwa ma hazie onye ọkwọ ụgbọ ala. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala na-aga nke ọma na-eru ndị lekwasịrị anya tupu oge awa mgbe ahụ a ga-enye ya / ọ bonuses.
A na-agbakwunye sistemu nlekota GPS emelitere iji mee ka usoro njem dị mma ma dịkwa larịị. A ga-emelite ahịrị ụzọ ahụ mgbe niile yana onye na-ahụ maka AI dị elu ga-enye ụzọ ọzọ kachasị mma. Ọ bụrụ na ị niile ndị a kwuru nhọrọ wee budata Indriver Android.
Ịwụnye ngwa ga-enye ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ.
Ọbụna onye na-ahụ maka GPS dị elu ga-enyere aka ịnye ụzọ ziri ezi.
Nhọrọ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala dị.
A na-agbakwunye ọnụahịa na-akwụghị ụgwọ na usoro ịkwụ ụgwọ.
Ndị na-ebu ibu dị arọ dị iche iche dịkwa maka ntinye akwụkwọ.
Usoro nnyefe ngwa ngwa dị.
A ga-ebunye ngwugwu ruru kilogram 20.
Otu esi ebudata Indriver Apk
Ụdị ngwa kachasị ọhụrụ enwere ike ibudata na Ụlọ Ahịa Play. Mana a bịa na nnweta mgbe ahụ ọ nwere ike ịchọ ụfọdụ ikike na ntozu. Naanị smartphones tozuru oke ka a na-ahapụ ka ibudata ngwa.
Ndị ọrụ gam akporo ahụ na-achọ ebe ndị ọzọ dị n'ịntanetị. Nke ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ibudata faịlụ Apk emelitere na-enweghị ikike ọ bụla. Mgbe ahụ, anyị na-akwado ndị ọrụ mkpanaka ka ha gaa na webụsaịtị anyị.
Mgbe wụnye ngwa n'elu dị iche iche smartphones, anyị na-enweghị ike na-agba akaebe ọ bụla dị oké njọ nke n'ime. Usoro nke echichi na itinye n'ọrụ nke ngwa dị nnọọ mfe. Naanị budata faịlụ ngwa ahụ ma nwee ọ enjoyụ ọtụtụ ịnya ụgbọ ala echekwara.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ụgbọ njem ịntanetị kachasị mma. Mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ndị na-eji ekwentị mkpanaaka wụnye ngwa ndị a na-egosi ebe a. Kedu ndị bụ Ngwa Coyote na NAVIC Ngwa ngwa.
Yabụ na ike agwụla gị maka ọnụ ahịa ụgbọ elu dị elu yana ịchọ ebe ọzọ. Nke ahụ na-enye ndị na-anya ya ohere ịhọrọ ịnya ụgbọ ala dị ọnụ ala yana ọnụ ahịa ụgbọ ala. Wee budata ma wụnye Indriver Apk nke enwere ike ịnweta site na ebe a.
Categories Maps & Navigation, Apps Tags Android indriver, Indriver Apk, Ngwa indriver, Nbudata indriver Mail igodo
Nbudata ihe nkiri Live Live maka gam akporo [ngwa]